Tanora · Marsa, 2011 · Global Voices teny Malagasy
Tanora · Marsa, 2011
Tantara mikasika ny Tanora tamin'ny Marsa, 2011
Maraoka: Ny kabarin'ny Mpanjaka ao amin'ny Twitter
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana11 Marsa 2011
Tamin'ny Alarobia, nanao ny lahateniny voalohany ho an'ny firenena ny Mpanjaka Mohammed VI hatramin'ny nisian'ny fihetsiketsehana mandàla ny demokrasia. Tsy niteny mivantana momba ny hetsika, fa nampanantena "fanovàna lalampanorenana mazava" sy fitsapakevi-bahoaka momba ny "fitsinjaram-paritra tsara," mikendry izay hanomezana fahaleovantena tanteraka ny faritra manoloana ny governemanta izy
Ny vehivavy maraokana, tahaka ireo vehivavy rehetra maneran-tany dia mankalaza koa ny faha-100 taonan'ny andron'ny vehivavy. Teo anivon'ny fiarahamonim-pirenena dia efa hatramin'ny ela izy ireo no niady hanana fiainana mendrika sy tsaratsara kokoa. Ary satria mbola mitohy hatrany ny “tazon”ny fahafahana andrandraina avy amin'ny “Fanoheran'ny Arabo” manerana ny ilany andrefana...
Koety: Olona an-jatony mitaky fanovàna praiminisitra
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana09 Marsa 2011
An-jatony vitsivitsy ireo vahoaka nivory tao Koety androany mitaky ny “governemanta vaovao”, sy praiminisitra vaovao, ary fomba fiasa vaovao.” Na dia misy aza ireo miteny fa i Koety dia miezaka manatratra ny rivo-panovàna mitsoka mahery eo amin'ny tontolo Arabo, ny hafa anefa mandà izany, milaza fa tsy misy ifandraisany amin'ny...
Amerika Latina07 Marsa 2011
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana07 Marsa 2011
Mihoatra ny 2500 ny Libaney nanao diabe tamin'ny alahady (27 Febroary 2011) tao an-drenivohitra Beirut manohitra ny rafitra miankina amin'ny sekta izay heverin'izy ireo ho fototry ny olana ao amin'io firenena io. Ato no hahitantsika hoe tahaka ny ahoana ny fihetseham-pon'ny Libaney an-tserasera. Efa misy koa ny miomana hanao fihetsiketsehana...
Libya: Lahatsary mampiseho ny herisetra valin-kafatr'i Gaddafi
Anivon'ny tsy fanakanana tsy ahazoa-baovao na avy amin'ny aterineto na avy amin'ny gazety, dia misy ihany ny lahatsary tafaporitsaka avy any Libya, hanaovantsika topimaso izay mitranga any an-toerana Zawiyah, Misurata, Ras Lanuf, Al-Bayda ary Ajdabiya.
Libya: Lasa malaza fatratra ny “mihomehy” Zenga Zenga
Niely niampita vetivety tamin'ny aterineto ny kabarin'ilay tsy mifaditrovana Gaddafi"Zenga Zenga" . Miverimberina lasa hira, nahavitana hira isan-karazany ny sombin-kabary nitenenana tamin'ny vahoaka izany nampanantenan'ny "Guide" ny "hanadio an'i Libya isaky ny santimetatra, isan-trano, isan'efitrano, isaky ny arabe (Zenga Zenga)" ary mihamitombo any amin'ny fifampizaran-dahatsary ka mahamiramirana kokoa ny mpanohitra...
Azia Atsinanana07 Marsa 2011
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana04 Marsa 2011
Sekoly Ambaratonga (ambony) faharoa maromaro no 'nanapoaka sarom-bilany' hihetsika hanohitra ny governemanta manerana an'i Bahrain tamin'ny Talata 1 Martsa. Ho fanohanana ireo mpanao fihetsiketsehana milasy ao amin'ny Fihodinana ao Pearl (Lulu) dia nivoaka ny sekoliny daholo teny anelanelan'ny andro fianarana, na lahy, na vavy, ka nanao filaharana teny ivelan'ny sekolin-dry...